Twitter အသုံးပွုသူတှရေဲ့ ဖုနျးနံပါတျတှကေို ကိုယျကြိုးအတှကျ လှဲမှားစှာအသုံးပွုနတေယျလို့ သံသယဝငျခံရတဲ့ နိုငျငံအခြို့။ – SoShwe
Home/Tech/Twitter အသုံးပွုသူတှရေဲ့ ဖုနျးနံပါတျတှကေို ကိုယျကြိုးအတှကျ လှဲမှားစှာအသုံးပွုနတေယျလို့ သံသယဝငျခံရတဲ့ နိုငျငံအခြို့။
Twitter အသုံးပွုသူတှရေဲ့ ဖုနျးနံပါတျတှကေို ကိုယျကြိုးအတှကျ လှဲမှားစှာအသုံးပွုနတေယျလို့ သံသယဝငျခံရတဲ့ နိုငျငံအခြို့။
So Shwe February 7, 2021	Tech Leaveacomment
ကမ်ဘာတဈဝှမျး အသုံးပွုသူသနျးရာခြီရှိတဲ့ နာမညျကွီး လူသုံးမြားတဲ့ လူမှုကှနျရကျတဈခုဖွဈတဲ့ Twitter ကုမ်ပဏီမှ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူတဈဦးဟာ မကွာသေးခငျက သတငျးအခကျြအလကျ ခိုးယူခံရမှုနဲ့ဆိုငျတဲ့ပွဿနာမြိုး ကွုံတှလေ့ာရကွောငျး ဆိုလာပါတယျ။ Twitter ကုမ်ပဏီမှ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူတဈဦးကလညျး အဆိုပါ သတငျးအခကျြအလကျခိုးယူသူဟကျကာတှဟော နိုငျငံတျောကထောကျပံ့ပေးထားတဲ့ မသမာသူတှဖွေဈနိုငျကွောငျး သကျသအေထောကျအထားတှအေရ သိရှိထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ အဆိုပါဟကျကာတှဟော တှဈတာအသုံးပွုသူတှရေဲ့ ဖုနျးနံပါတျတှကေို ခိုးယူဖို့ ကွိုးစားခဲ့တယျလို့ Twitter ကုမ်ပဏီက ဆိုပါတယျ။
လူမှုကှနျရကျလုံခွုံရေးသုတသေနအဖှဲ့က တှဈတာကုမ်ပဏီဟာ အသုံးပွုသူတှရေဲ့ လုံခွုံရေးဆိုငျရာအခကျြအလကျတှကေို သိမျးဆညျးထားသိုမှု ဟာကှကျရှိနကွေောငျး ရှာဖှတှေရှေိ့ခဲ့ပါတယျ။ Twitter ကုမ်ပဏီကတော့ အသုံးပွုသူဘယျနှဈဦးရဲ့ ဖုနျးနံပါတျတှေ ၊ အခကျြအလကျတှဟော ဟကျကာတှလေကျထဲရောကျသှားပွီလဲ? ဆိုတဲ့မေးခှနျးကိုတော့ လကျရှိအခြိနျထိ အဖွမေပေးနိုငျခဲ့ပါဘူး။
Twitter ကုမ်ပဏီရဲ့ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူတဈဦးက တှဈတာအသုံးပွုသူတှရေဲ့ ဖုနျးနံပါတျနဲ့အခကျြအလကျတှကေို ခိုးယူဖို့အတှကျ အသုံးပွုခဲ့တဲ့ဟကျကာတှရေဲ့ IP Addresses တှကေို ခွရောခံကွညျ့လိုကျတဲ့အခါမှာ အီရနျနိုငျငံ ၊ အစ်စရေးလျနိုငျငံနဲ့ မလေးရှားနိုငျငံတှကေို တညျနရောပွနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။
TechCrunch နညျးပညာစာပထေုတျလုပျဖွနျ့ခြီရေးအဖှဲ့အစညျးမှ လူမှုကှနျရကျလုံခွုံရေး သုတသေနပညာရှငျတဈဦးဖွဈတဲ့ Ibrahim Balic ကတော့ တှဈတာအသုံးပွုသူတဈဦးခငျြးစီရဲ့ ဖုနျးနံပါတျတှကေို အသေးစိတျစီစဈရှာဖှရေငျး တူညီတဲ့ဖုနျးနံပါတျ ၁၇ သနျးကို ရှာဖှတှေရှေိ့ကွောငျး ၂၀၁၉ ဒီဇငျဘာလမှာ ထုတျဝခေဲ့တဲ့ ဆောငျးပါးမှာ ရေးသားဖျောပွထားပါတယျ။ ဒါဟာ Twitter ကုမ်ပဏီရဲ့ ဆကျသှယျမှုပိုငျးဆိုငျရာကဏ်ဍမှာ လဈဟာနမှေုကွီးတဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။
သိပျမကွာခငျမှာတော့ Twitter ကုမ်ပဏီမှ အဆိုပါလဈဟာမှုကို ကုမ်ပဏီအနနေဲ့ အသုံးပွုသူတှရေဲ့အခကျြအလကျတှကေို လုံခွုံစှာထားသိုပေးတဲ့အဖှဲ့က ပွနျလညျပွငျဆငျလိုကျပွီဖွဈကွောငျးနဲ့ မသမာတဲ့ရညျရှယျခကျြနဲ့ အသုံးပွုသူလို့ ထငျရတဲ့ အသုံးပွုသူတှရေဲ့ အကောငျ့တှကေိုလညျး ဖကျြသိမျးလိုကျပွီဖွဈကွောငျး ထုတျပွနျကွညောခဲ့ပါတယျ။
Twitter အသုံးပြုသူတွေရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ကိုယ်ကျိုးအတွက် လွဲမှားစွာအသုံးပြုနေတယ်လို့ သံသယဝင်ခံရတဲ့ နိုင်ငံအချို့။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အသုံးပြုသူသန်းရာချီရှိတဲ့ နာမည်ကြီး လူသုံးများတဲ့ လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Twitter ကုမ္ပဏီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးဟာ မကြာသေးခင်က သတင်းအချက်အလက် ခိုးယူခံရမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာမျိုး ကြုံတွေ့လာရကြောင်း ဆိုလာပါတယ်။ Twitter ကုမ္ပဏီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးကလည်း အဆိုပါ သတင်းအချက်အလက်ခိုးယူသူဟက်ကာတွေဟာ နိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့ပေးထားတဲ့ မသမာသူတွေဖြစ်နိုင်ကြောင်း သက်သေအထောက်အထားတွေအရ သိရှိထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဆိုပါဟက်ကာတွေဟာ တွစ်တာအသုံးပြုသူတွေရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို ခိုးယူဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ Twitter ကုမ္ပဏီက ဆိုပါတယ်။
လူမှုကွန်ရက်လုံခြုံရေးသုတေသနအဖွဲ့က တွစ်တာကုမ္ပဏီဟာ အသုံးပြုသူတွေရဲ့ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကို သိမ်းဆည်းထားသိုမှု ဟာကွက်ရှိနေကြောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Twitter ကုမ္ပဏီကတော့ အသုံးပြုသူဘယ်နှစ်ဦးရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေ ၊ အချက်အလက်တွေဟာ ဟက်ကာတွေလက်ထဲရောက်သွားပြီလဲ? ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတော့ လက်ရှိအချိန်ထိ အဖြေမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
Twitter ကုမ္ပဏီရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက တွစ်တာအသုံးပြုသူတွေရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့အချက်အလက်တွေကို ခိုးယူဖို့အတွက် အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဟက်ကာတွေရဲ့ IP Addresses တွေကို ခြေရာခံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ အီရန်နိုင်ငံ ၊ အစ္စရေးလ်နိုင်ငံနဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံတွေကို တည်နေရာပြနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
TechCrunch နည်းပညာစာပေထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီရေးအဖွဲ့အစည်းမှ လူမှုကွန်ရက်လုံခြုံရေး သုတေသနပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Ibrahim Balic ကတော့ တွစ်တာအသုံးပြုသူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို အသေးစိတ်စီစစ်ရှာဖွေရင်း တူညီတဲ့ဖုန်းနံပါတ် ၁၇ သန်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်း ၂၀၁၉ ဒီဇင်ဘာလမှာ ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ ဆောင်းပါးမှာ ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါဟာ Twitter ကုမ္ပဏီရဲ့ ဆက်သွယ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍမှာ လစ်ဟာနေမှုကြီးတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သိပ်မကြာခင်မှာတော့ Twitter ကုမ္ပဏီမှ အဆိုပါလစ်ဟာမှုကို ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ အသုံးပြုသူတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကို လုံခြုံစွာထားသိုပေးတဲ့အဖွဲ့က ပြန်လည်ပြင်ဆင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ မသမာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အသုံးပြုသူလို့ ထင်ရတဲ့ အသုံးပြုသူတွေရဲ့ အကောင့်တွေကိုလည်း ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။
Previous စဈပှဲအတှကျပွငျဆငျထားသလိုပဲ ကပျရောဂါပြံ့ပှါးမှုအတှကျ ပွငျဆငျထားရမယျလို့ သတိပေးလိုကျတဲ့ Bill Gates
Next ကမ်ဘာ့ပညာရေးနယျပယျမှာ ဗွိတိနျနိုငျငံမှ တက်ကသိုလျကွီးတှေ ထိပျဆုံးမှ ဦးဆောငျနရေတဲ့အကွောငျးရငျးမြား။